> Resource > Video > Sidee inuu ka soo kabsado Videos ka Canon Vixia fiidiyo
Waxaan soo kaban karto, tirtiray Videos ka Canon Vixia fiidiyo?
Hey, saaxiibkay si qalad ah la tirtiro video a off aan fiidiyo Canon Vixia HF M41. Ma jiraa hab kasta oo dib u soo ceshano video in? Anigu ma aan diiwaan wax kale tan iyo Kabcada_. Fadlan ha i caawi Thanks.
Dhab ahaantii, video tirtiray waa uun xogta la aqoonsan yahay sida geli karin on your fiidiyo Canon Vixia iyo aad u hanato karo ka hor inta uu overwritten by xog cusub oo ku saabsan qalab aad. Waxaad tahay nasiib maxaa yeelay, idinku ma isticmaali aad fiidiyo tan iyo video la tirtiray, taas oo ka dhigaysa in aad suurto gal ah si ay u soo ceshano barnaamijka Canon Vixia ah fiidiyo video kabashada.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac awood u in aad ka bogsato videos ka fiidiyo Canon Vixia in, hab fudud oo degdeg ah oo khatar la'aan. No arrin aad Canon Vixia fiidiyo video uu lumo sababta oo ah ula kac ah ama shil tirtirka, formatting, howlgal aan habboonayn ama xataa weerar virus, qalab soo saaro karaa si fudud. Ka sokow, waxa kale oo aad aad dib u soo ceshano kartaa sawiro iyo files audio ka fiidiyo Canon Vixia.
Download version tijaabo ah Wondershare Photo ah Ladnaansho inuu ka soo kabsado Canon Vixia fiidiyo video hadda. Version maxkamad Tani waxay kaa caawinaysaa in aad baarista fiidiyo Canon Vixia si aad u hubin karaan in video laga badiyay la kama uusan soo kabsan karaan ama.
Kabsado Videos ka Canon Vixia fiidiyo in 3 Talaabooyinka
Aan ka soo kabsado tirtiray videos ka fiidiyo Canon Vixia la Wondershare Data Recovery for Windows. Users Mac raaci karaan talaabooyin la mid ah la Mac version of qalab aad.
Tallaabada 1 Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare Photo Recovery on your computer
Kadib markii ay barnaamijka, waxaad arki doonaa dhammaan qalabka ay taageerayaan in suuqa kala bilowga. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in guji "Start" in ay sii wadaan.
Fiiro gaar ah: Waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad fiidiyo Canon Vixia ama kaadhka xusuusta bilaabi Canon Vixia fiidiyo video kabashada.
Tallaabada 2 baarista fiidiyo Canon Vixia ama kaadhka xusuusta ay
Hadda waxaad dooran kartaa warqad drive aad fiidiyo Canon Vixia ama kaadhka xusuusta ay ka guji "Scan" si aynu barnaamijka iskaan videos laga badiyay waxaa ku.
Tallaabada 3 Ladnaansho videos ka fiidiyo Canon Vixia
Ka dib markii iskaanka, helay files aad fiidiyo Canon Vixia la soo bandhigi doonaa "Video", "Photo" iyo qaybaha "Audio".
Waxaad calaamadee karaa videos aad laga badiyay oo guji "Ladnaansho" button uu furmo iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo videos soo kabsaday intii lagu jiray soo kabashada si looga fogaado in xogta overwritten dib si aad u fiidiyo Canon Vixia.